सिंहदरबारमा १९९७ माघ ६ गते के के भएको थियो ? - Sadarline
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ १४, २०७५ | 328 Views ||
शुक्रराज शास्त्रीलाई सिंहदरबारमा ल्याई शंकर शमसेर र बहादुर शमसेरको उपस्थितिमा बिभिन्न आरोपहरु लागाई बयान लिने काम शुरु भयो । यस क्रममा बहादुर शमसेरले “त्यस्तो कार्यहरु गरेर तँ नेवारले हाम्रो मुलुकमा के खोजेको ?” भन्ने प्रश्न गरे । शुक्रराज शास्त्रीले त्यस्को जवाफमा “मौलिक अधिकार” भनेर जवाफ दिए । बहादुर शमसेरले “अधिकार भनेको के हो ?” भनी पुनः प्रश्न गरे । शुक्रराजले पनि गड्काइमा “अधिकार भनेको फण्डामेण्टल राइट” भनी जवाफ दिए । बहादुर शमसेरले फेरी रिसाएर ठुलो श्वरमा कराउँदै “राइट भनेको के हो ?” भनी सोधे । शुक्रराज शास्त्रीले पनि त्यसै श्वरमा “राइट” भनेको “ हक, मैले मेरो हक खाजेको” भनि जवाफ दिए ।
बहादुर शमसेर रिसाएर “हाम्रो राज्यमा तँ नेवारको हक ?” भनी उफ्रिन थाले ।
अभियुक्तहरु उपर फैसला —
वि.सं. १९९७ को माघ ६ गते का दिन बिहान १०—११ बजे नेपाल प्रजा परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई नेल, सिक्री र हतकडीका साथ पाश्र्ववती सैनिकको घेरामा राखी सिंहदरबार फुटबल चउरमा लगियो । उनीहरुलाई पश्चिमपट्टि फर्काएर उभ्याइएको थियो । अघिल्तिर पालमा राणाहरु र चउरमा भारदारहरु थिए । एकछिनपछि सदर जेलबाट शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि हतकडी, नेल सिक्रीमा सिंहदरबारमा नै ल्याइयो ।
जुद्ध शमसेर त्यसको केही समयपछि आए र श्री ५ त्रिभुवनलाई सलाम गरे जसतो गरे । त्यही समयमा इन्द्रबहादुर कार्कीले एउटा कागजको मुठठा जुद्ध शमशेरलाई दिए । जुद्ध शमशेरले पनि “तपाईहरुलाई किन बोलाएको थाहा छ ? हिन्दुस्थानको नीच जातका सोसलिष्टहरुको इसारामा हाम्रो गाथ गद्दी ताकि रहेका देशद्रोहीहरुलाई के कस्तो दण्ड दिनुपर्ने भनी राय लिन बोलाएको हँु भनी बोले । त्यसैगरी श्री ५ त्रिभुवनतिर हेरेर यिनीहरु को हुन थाहा छ ? यिनीहरु हाम्रो चिहान खन्न आएका रक्तपात मण्डली हुन् । रक्तपात मण्डली भनेको के हो भने श्री ५ ले कुनै न कुनै बहाना बनाएर हामी सबैलाई बोलाएर यहुदीहरुलाई जस्तै एकै ठाउँमा राखेर करेण्ट पास गरेर खरानी पारे जस्तै पार्ने षडयन्त्र ।
“यी सबको बीउ छर्ने चाँही उ त्यो शुक्रराज भन्ने ज्यापू हो । त्यसले कसरु बीउ छ¥यो भने भन्ने थाहा छ, तिमीहरुलाई ? हिन्दुस्थानमा गान्धी भन्ने एकजना छ नि, हो त्यसैको लहै लहैमा लागेर, त्यसैसँग सल्लाह साउति गरेर यहाँ त्यसको बीउ छर्ने त्यै ज्यापु हो”
त्यसरी जुद्धशमशेर बोलिरहेको बेला नै शुक्रराजशास्त्रीले भने “ यो के तमासा हो, महाराज ,एक्लै बोलिरहनु उचित भएन, यति धेरै भाइभारदारहरुको बीचमा एक्लै बोलिरहन सुहाएन ।” भनि बीचमा कुरा काटे । त्यो सन्नासाथ रिसाएर “तँलाई नै मार्नु पर्छ ।” भनेपछि शुक्रराजले पनि “म मर्न तयार छु । तर इन्साफ चाहिन्छ, को देशद्रोही हो” भन्ने कुरा हामीहरुलाई बताउने मौका दिनु पर्दछ । अनि यो सभामा उपस्थित भाइभारदारहरुले फैसला गरुन कि देशद्रोही को हो ? संगीनको घेरामा हामीलाई राखेर एक्लै फत्फताउनु भन्दा पहिले हामीलाई पनि बोल्ने मौका दिनु पर्छ ।” शुक्रराजशास्त्रीको यस भनाइले जुद्ध शमशेर रिसले चुर भई यता र उतागर्न थाले । सिपाहीहरुले पछाडीबाट चुप लाग, चुप लाग भनिरहेका थिए ।
“के रे ज्यापु, के रे, धेरै नेपरिएर बोल्छस् ज्यापु तँ ? यै ज्यापु हो, हिन्दुस्थानको गान्धी भन्नेको सल्लाह लिएर त्यसको बीउ यहाँ छर्ने । तँ धेरै नेपरिन्छस् भने म ऐले मेरो मान्छेहरुद्वारा तँलाई कुल्चाएर मारि दिन्छु ।” जुद्ध शमशेर गर्जिए । स्पष्ट छ, त्यसमा भाइभारदारको अगाडी श्री ३ महाराजसँग मुख मुखै लागेर बोलनु उनको अपमान गर्नु थियो । तसर्थ उनी रीसले तम्तमाएका थिए । रीसको त्यही आवेगमा उनी गर्जिएका हुन् ।
शुक्रराजले पनि उत्तिकै जोश र फुर्तिले भने –“ तयार छु , महाराज ! म महाराजसँग न्याय मागी राखेको छ ुदया होइन । यतिका भाइभारदारहरुलाई जम्मा गरेर अरुलाई बोल्न नदिइ, एकतर्फी जे मन लाग्यो उही भन्ने र जसलाई पायो देशद्रोही भन्न पाइन्छ ? यहाँ हामीले पनि जवाफ दिन पाउनु पर्छ, हामी त्यो न्याय चाहन्छौ महाराज !”
“अझ बोल्छस् ए ज्यापु ! तलाई एैले नै कुल्चाई कुल्चाई मार्छु , के साचेको छस् ?” जुद्धशमशेरको रीशको आवेश अझ बढिरहेको थियो । उनी मुर्मुरिएर आँखै नदेख्ने भएका थिए । उनको कोप यति प्रचण्ड थियो कि उनले कसलाई के गर्ने हुन् भन्नै सकिंदैनथ्यो ।
त्यसपछि जुद्धशमशेरले शुक्रराज शास्त्री र मुरली पण्डितद्वार गरिएका अपराध बारे प्रष्ट पार्दै एउटा भाषण गरे । जुन भाषणमा उनले शुक्रराज र मुरली पण्डितलाई ८ वटा अपराध गरेको आरोप लगाएका थिए । शुक्रराजलाई “महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरुसित भेट गरी नेपाल सम्बन्धी कल्पित कुरा गरी नेपालको विरोधमा कार्य गरेको आरोप र बदनाम गराउन नेपाल सम्बन्धी भए नभएका कुराहरु जनता पत्रिकामा प्रकाशित गरेको आरोप लगाइएको थियो ।”
माहिला गरु हेमराज पाण्डेले धर्मशास्त्रको आडमा अभियुक्तहरुलाई ज्यान सजाय दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको सुनेर शुक्रराज शास्त्रीले प्रजाहरुलाई शोषित, दलित पारी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने शासकलाई पनि धर्मशास्त्रमा सजाय तोकिएको छ । उद्धृत गर्न पाउँ भन्दा, जुद्धशमशेरले फेरि उनलाई जथाभावी गालीका अपशब्द बोली “यी सबको नाइके तै होस्” भने शुक्रराज शास्त्रीले त्यसको प्रतिपाद गर्दा उनको पछाडि गएर सूर्यबहादुरले चुप लाग्न दवाव दिए ।
जुद्धशमशेरले एउटा लामो कागत हेर्दै अभियुक्तहरुले पाएको सजाय सुनाउन थाले । सर्वप्रथम शुक्रराज शास्त्रीलाई सर्वश्वहरण सहित फाँसीको (मृत्यु दण्ड ) सजाय सुनाइयो । त्यसको प्रत्युत्तरमा शुक्रराज शास्त्रीले “ओ३म् शान्ति” भनी एक पाइला अगाडी बढी उक्त सजाय स्वीकार गरेको दर्शाइ पुनः पछाडी आफ्नो ठाउँमा फर्के ।
गृष्मबहादुर देवकोटा –
श्रीशुक्रराज शास्त्रीको प्रजापरिषद्सँग कुनै सम्बन्ध थिएन । वहाँ यद्यपि कुनै राजनीतिक दलबन्दीमा सामेल थिएनन् । तापनि मात्र उनी आर्य समाजी हुन गएकाले र उनको सम्पर्क भारतीय नेता महात्मा गान्धी, नेहरुजी आदिसँग रहेको तथा काठमाण्डौमा गीताको प्रवचन गर्दा राजनीतिक व्याख्यान दिनु भएको अपराध नै उनी राणा शासकहरुको कोपभाजन बनिनु भएको हो ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ १४, २०७५ 10:57:07 PM |
Prevशुक्रराज शास्त्री संक्षिप्त परिचय
Nextअमर शहीदहरुको संझनामा